Guddoomiyaha maxkamada darajada 1aad ee gobolka Bari C/fitaax Aadan Axmed ayaa maanta ka badbaaday weerar la doonayey in lagu qaarajiyo.
C/fitaax Aadan Axmed ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Garoowe oo uu mudooyinkan ku sugnaa isagoo ku sii jeeday magaalada Boosaaso.
Hase ahaatee masuulkan ayaa gaadiidkii la socday uga haray magaalada Qardho, waxaana gaarigiisa oo socdaalkiisa sii watay lagu weeraray buuraha Galgala ee duleedka Boosaaso.
Lama oga in gudoomiyaha uu gaariga uga haray sababo la xiriira inuu ogaaday in wadada loogu jiro iyo in kale, balse gaariga ayaa markii dambe gaaray magaalada Boosaaso isagoo dushiisa ay ka muuqato rasaastii lagu weeraray inkastoo darawalkii waday uu ka badbaaday weerarkaas.
Guddoomiyaha Maxkamada darajada 1aad ee gobolka Bari C/fitaax Aadan Axmed ayaa horey xukuno dil u badan ugu riday shaqsiyaad lagu eedeeyey iney ka tirsan yihiin Al-shabaab oo la soo taagay maxkamada Boosaaso.
Weerarkan ayaa la aaminsan yahay iney ka dambeeyeen xoogaga Al-shabaab ee buuraha Galgala oo horey ugu hanjabay iney beegsan doonaan masuuliyiinta maamulka Puntland.
Dhowaan ayey aheyd markii Al-shabaab ay sheegatay iney ka dambeysay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaarajiyey taliyihii Booliska gobolka Bari ka dib markii uu isku qarxiyey nin dhexda ku soo xirtay waxyaabaha qarxa.
Wakiilada ka socday hay’addaha caalamiga ah iyo kuwo maxaliga ah ee shirka ka hadlay aya soo dhaweeyay baaqa dowladda Puntland ee ku saabsan in canshuurta la bixiyo iyagoo dhinaca kale dowladda ka codsaday in nidaam lagu kalsoon yahay loo sameeyo habka canshuurta loo qaadayo isla markaana dadka canshuurta laga qaadayo loo tago oo lagu qanciyo in wax laga qaadayo ay yihiin wax dalka loogu adeegayo.
Xeerka cusub ee canshuuraha ayaa si rasmi ah loo dhaqan galin doonaa bishan soo socota ee september, iyadoo wasaaradda maaliyadu codsatay in lagu dadaalo sidii canshuurta qaadista kor loogu qaadi lahaa si dalka loo hormariyo.